Uphumelele njani ekwakheni i-backlink kwiwebhusayithi yakho yendalo?
Kakade, akupheli kombuzo okwakha i-backlink kwiwebhusayithi yakho phakathi kwezinto eziphambili ekuphumeleleni kwi-Engine Engine Optimization. Kwakhona kuqondwa ukuba kukho ezininzi iindlela ezahlukeneyo zokuqhuba isicwangciso soqhagamshelwano esifanelekileyo. Kodwa kuthetha ukuthini ukwakha i-backlink kwiwebhusayithi yakho ngendlela engokwemvelo? Ewe, oko kuxhomekeke. Ke mna, ndiyakholwa ukuba inzame yam yakutshanje yokumisela iprofile yenkcazelo yangokwemveli yabonakala iphumelele. Ngoko, masenze ukuba kucacile - ukwakha i-backlinks ngokwemvelo kumela "umdlalo olungileyo," ngaphandle kokukopela nokuphulaphula izikhokelo eziphezulu zewebhu. Kwaye ndiza kujonga ngokufutshane kwizinto ezinobungozi "ezingekho ngokwemvelo" zendlela yokuqhagamshelanisa (kufuneka ubalekele kuzo zonke iindleko!). Ndiyathemba ukuba uya kubafumana ingqiqo xa usakha i-backlink kwiwebhusayithi yakho-indlela engcono kakhulu yendalo.
Gweba ukwakha i-Backlink kwiWebhsayithi Yakho nge:
Nxu lumano kunye namavili
ezona ziqhelanisiweyo zokwakha iziqhagamshelo, kodwa kufaneleke ukugwema-okokuqala kunye nokuphambili. Kwaye kukho iiplatifhu zeewebhu eziliqela kunye neefayili ezahlukeneyo ze-intanethi ukwenza umcimbi kunye nezikhonkco ze-barter. Ngokuqinisekileyo, ukutshintshana namanye ama-backlink kunye nabalandeli bakho bodwa kunokuba yinto ecacileyo kakhulu. Nangona kunjalo, ukujongana nekhonkco zokungqamanisa kwiintengiso, kunye neevili ezinxibelelwano (a. k. a. izicwangciso ze-pyramid zesakhiwo sezonxibelelwano) ngokuqhelekileyo zikhokelela kumthwalo omkhulu ogqithiseleyo kunye ne-backlink ephezulu kakhulu enobuncinane, obonakala ngathi. Kuthetha ukuba ukufaka i-link exchange or wheels empeleni kuchitha ixesha kunye nemali.
Yintoni enye - ukwenza njalo ngokuqinisekileyo yindlela efanelekileyo yokufumana ingqwalasela engathanga kakhulu kwiinjini eziphambili ezifana ne-Google ngokwayo. Kwaye akuthethi nto ngaphandle kwesigwebo esinamandla esiya kwi website yakho okanye kwiblogi. Yingakho ukutshintshana kunye nekhonkco ngokuqinisekileyo akuyona indlela engokwemvelo yokwakha i-backlink kwiwebhusayithi yakho, kunene?
Iiwebhsayithi ezingenanto ezingabalulekanga okanye ii-blogs enye into engamele isetyenziswe ukwakha i-backlinks indlela engokwemvelo. Enyanisweni, ukuba unomdla wokuhlawula amanqaku amaninzi emva kweemvelaphi zenkampani yesithathu engenawo nto enxulumene nesihloko sakho esiyinhloko okanye i-industry sphere, izikhonkco ezinjalo ziya kukunika ubuncinci (ubuncinane) (page). Okanye, kwimeko embi, unakho ukuhlawulwa ngu-Google ngokubhekiselele kwimisebenzi enjengeenkcukacha ezikhohlisayo nabakhohlisayo.
Ihlawulwe kunye nezinye iindawo ezixhasayo
Umgaqo-nkqubo osemthethweni we-giant search of world ubonisa umyalezo ocacileyo ngokuthe ngqo kuya kwamkeleka phantsi kweyiphi na imeko. Kukho konke malunga nezikhonkco ezihlawulwayo - ukuba kwenzeka ukuba i-Google ifumanisa iskimu sorhwebo kunye neefayile zengxube yokwakha, iya kuzisa intambo phantsi kwamacala onke. Nangona ihlawulwe i-backlinks inokubonakala ibonakala ngokusemgangathweni kwaye imvelo kunye nekhwalithi, ingozi inkulu kakhulu.
Phakathi kwezinye iindawo ezikhunjulwayo ezingaze zenzele ukwakha i-backlink kwiwebhusayithi yakho kwindlela engokwemvelo, ndincoma ukucaca okucacileyo kwinqanaba leenkcukacha eziphambili kunye neefama eziqhagamshelweyo.Ewe, into emalunga nemibini emibini edlulileyo yayidla ngokunceda kakhulu ukuvelisa iinqonkco ezincinci ukukhululeka - kufuneka ndivume le nyaniso. Kodwa ngoku loo macebo awasebenzanga kwakhona, ngaphandle koko, ngaphandle kokuba ufuna ngokwenene ukuzifumana ngokukhawuleza nokukhawuleza ukungahlawulwanga Source .